Isamsung i5700 Galaxy Spica ifika eSpain
El Isamsung I5700 Galaxy Spica ISpain ifika ngokusesikweni kwivenkile yeNdlu yeeFowuni kwaye inokufumaneka simahla kwaye ixhaswe ngabaqhubi. Esi sesibini Isiphelo sendlela Android yendlu ye-Samsung kwaye nangona inomahluko othile wobuchwephesha ngokubhekisele kumntakwabo Samsung Galaxy I7500 ngaphandle ziphantse zafana.
Sele siyivavanya le fowuni kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ndikuxelele kakhulu malunga unboxing njengabo Ukucaciswa kobugcisa. Ngale venkile ingasentla ungafumana simahla i-279 euros kodwa ukuba uyayifuna ngenkxaso izakufumaneka ngeOrange kunye neYoigo. Ngowokuqala unokufumana ukusuka kwi-69 Euro ukuya kuthi ga kwi-239 yee-euro ngokuxhomekeke kuhlobo lwesivumelwano kwaye ukuba kuyathwala, ukufuduka okanye ubhaliso olutsha. Nge-Yoigo ixabiso layo liya kuba yi- € 169 okanye i- € 189.
Ezona mpawu zibalulekileyo yiprosesa ye-800 MHz, iscreen se-Amoled capacitive esikwi-3,2-intshi kunye nesisombululo sama-pixels angama-320 × 480, zombini iWi-Fi, iBluetooth, unxibelelwano lweGPS kunye nokukwazi ukudlala iifayile zeDivx.
Isiphelo sendlela enkulu yokungena Inkqubo ye-Android kwaye ngexabiso layo kunokulinga kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Isamsung i5700 Galaxy Spica ifika eSpain